Waddadii Dheereyd ee Burma usoo martay xasuuqa
Bishii Marso 21-keedii, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shaaca ka qaaday in millatariga dowladda Burma uu xasuuq u geystay dadka laga tirada badanyahay ee Rohingya.
Waxaa jiray waddo loo soo maro xasuuqa. “Taasi waa aas-aaska xasuuqa, taasoo xaqiiqdii ah mid mar hore lasii diyaariyo muddo sannado ah ama xitaa tobaan sano ah, iyadoo loo marayo hab joogta ah oo ka baxsan bani’aadannimada oo sheydaannimo ah,” ayuu yiri Xoghaye Blinken. Wuxuu intaasi raaciyay “Dadka Rohingya, oo kaalin weyn uga jiray mujtamaca Burma muddo qarniyo ah ayaa arkay xuquuqdoodii iyo muwaadinnimadoodii oo laga xayuubiyay.”
Sannadki 1962-ki, millatariga Burma ayaa sameeyay af-ganbi, waxyar kaddib isla markiiba waxay ku dhaqaaqeen in ay ficil sheydaannimo iyo cadaadis saaraan Rohingya iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badanyahay.
Dowladda ayaa ayaa muwaadinnimadii kala laabatay Rohingya, kaddibna qaadday olole argagixin ah sida kufsi iyo dil iyaga ka dhan ah isla markaana burburisay bulshooyinkii qowmiyaddaasi; kaddibna ku qasbay xerooyin barakac.
Waxaa jiray is barbar dhig xooggan oo u dhexeeya dhacdooyinkii Burma ee taariikh ahaan horseeday xasuuqa meelo kale, ayuu yiri Xoghaye Blinken. “Rohingya waxaa lala barbar dhigay cayayaanka booddada, qodxo iyo nuucyo kale oo soo duulay, sida qowmiyadda Tutsiga loola barbardhigay baranbarada, iyo sidii Yahuudda loola barbardhigay doolliga iyo dullinno.”
“Go’aaminta maanta ee xasuuqa iyo danbiyada ka dhanka ah bani’aadannimada waxaa diiradda lagu saaray Rohingya, laakin waxaa sidoo kale muhiimaddeeda leh in la aqoonsado in muddo tobnaan sano ah uu millatariga Burma geysanayay dil, kufsi, iyo gaboodfallo kale oo ka dhan ah xubnaha qowmiyadaha kale ee laga tirada badanyahay iyo dadka heysta diimaha kale ee laga tirada badanyahay. Warbixinnada tacaddiyadaasi aad ayay u badanyihiin, si wanaagsan ayaana loo diiwaangeliyay. Waxay ka dhaceen dhammaan gobollada Burma.”
Dowladda Mareykanka waxay si xooggan u taageereysaa Guddiga Madaxa bannaan ee Baaritaanka Myanmar, kaas oo ururinaya, keydinaya isla markaana taxliilinaya cadeymaha danbiyada halista ah ee caalamiga ah ee ka dhacya Burma.
Xataa anagoo dhidibbada u taagnayna isla xisaabtanka mustaqbalka, waxaan sidoo kale ka shaqaynaynaa sidii loo joojin lahaa gabood-fallada joogtada ah ee ay ciidamadu wadaan, in la sii daayo dhammaan dadka sida xaq-darrada ah u xiran, taageerno shacabka Burma oo ku dadaalaya sidii dalkooda dib ugu soo celiyn lahaayeen tubta dimuqraadiyadda. " ayuu yiri Xoghaye Blinken.
“Dowladda Mareykanka waxay sidoo sii wadeysaa sidii ay taageero muuqata ugu fidin laheyd si loo daboolo baahiyaha bani’aadannimo ee deg degga ah ee ay qabaan dad Rohingya iyo dhammaan inta ay saameysay dhibaatada – ku dhawaad $1.6 bilyan ayaa la bixiyay tan iyo sannadki 2017 oo la aaddiay wax walba laga soo billaabo guryenta, waxbarashada iyo barnaamijka gaarka ah taagerridda dhanka maskaxda iyo nafsaaniyadda ee loo fidinayo dhibanayaasha kasoo badbaaday masiibada.”
“Diiwaangelinta kiisaska ayaa sii xoogeysanaya. Guddiga Madaxa bannaan ee baaraya gabood-fallada Mayanmar, ayaa kaliyah ururiyay in ka badan 1.5 million oo daliilood iyo xogo oo ay ku jiraan marqaatiyo la wareestay, dokumintiyo, farriimo, sawirro, muuqaallo, sawirro kor laga qabtay iyo bogaga baraha bulshada,” ayuu yiri Xoghaye Blinken. “Maalin ayaa imaan doona markaas oo kuwa masuulka ka ah ficilladaan gurracan ay ka jawaabi doonaan.”